Dhacdo: Hooyo dhalaankeeda gowracday ka dibna hilibkiisa u iibgeysay suuqyada Ugu waa Weyn Dalka.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: May 8, 2015, 5:19 pm
Dhacdadaani ayaa waxa ay ka dhacday dalka Shiinaha kadib markii hooyo magaceeda lagu sheegay Shegriina ay gowracday wiil 5-sano jir ah oo ay iyadu dhashay.
Wiilkaani la gowracay ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Tom, waxa uuna gowriciisu imaaday kadib markii uu saaxiib la noqday Carruur ay wax isla baran jireen oo aaminsanaa diinta islaamka, kuwaasi oo looga shakiyay inay il duufsadaan Tom.
Dilka kadib ayay hooyadaasi ku dhiiratay in Hilibka canugeeda ay u iibgeyso suuqyada lagu iibiyo hilibka bani’aadamka kaasoo deegaanada qaar ee ku yaalla Dalka Shiinaha ka leh qiimo gaar ah, waxaana dalkaasi gaar ahaan miiga dega qowmiyado ka ganacsada Hilibka dhalaankooda.
Tom oo ah wiilka da’da yaraa ee la gowracay ayaa waxa uu heystay diinta kirishtanka, waxaana laga ilaalin jiray inuu saaxiib ka dhigto carruur dhigiisa ah oo aaminsan diinta islaamka, maadaama hooyadii dhashay ay aheyd macalimad diimaha ka faafisa goobaha macbadka u ah dadka diinta kirishtanka heysta.
Arrintaani oo goor dambe ay ka war heleen Ciidamada Booliska dalkaasi, ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen baaritaano ay ku xaqiijinayaan sababta ay hooyadaasi u dishay Canugeeda, waxa ayna hada wadaan baaritaano lagu xaqiijinaayo dhacdadaasi, sida ay daabaceen warbaahinta kasoo baxda Shiinaha.